London Burmese Community – ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
Mar Mar Aye - ဂီတပညာရှင် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ပြည့် မွေးနေ့
(ကံ ဉာဏ် ၀ီရိယ) ၀မ်းမြန်မာကွန်မြူနီတီ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ ဆန်းဒေး ကျင်းပမည်
ခေတ်ပြတိုက်က နွေတညကို မိတ်ဆက်မည်
London Burmese Community – ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ
လန်ဒန် မြန်မာမိသားစုများ၊ လန်ဒန်ဝိဟာရကျောင်း၊ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၄
ဧပြီလ၂၁ရက်နေ့ နံနက်၆နာရီ၃၀တွင်ကွယ်လွန်သွားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ
့ချုပ်နာယက သတင်းစာ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အား ရည်စူးသည့် ရက်လည်
ဆွမ်းသွပ်နှင့် ဂုဏ်ပြု ဆု တောင်းပွဲ အခမ်းအနားကိုလန်ဒန် ဝိဟာရ
မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အားရည်စူး၍ မြတ်စွာဘုရားရှင် နှင့်တကွသံဃာတော်များ
အားလှုဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှုဒါန်း မည်ဖြစ်ပြီး၊ကျန်ရှိငွေများကို
ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ပေးပို့ လှုဒါန်း သွားမည်ဖြစ် ပါသဖြင့်
မိမိတို့တတ်အား သရွေ့ ပါဝင်လှုဒါန်း နိူင်ကြပါသည်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်
အားချစ်ခင်လေးစားသူ အားလုံးတက်ရောက်နိုင် ကြပါရန်
အချိန်။ ။ဧပြီလ ၂၇ရက်၊ နေ့ လည်၃:၃၀မှ ညနေ ၆း၃၀
နေရာ။ ။လန်ဒန်ဝိဟာရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဝင်ဘလေ လန်ဒန်မြိူ့ )
မှတ်ချက်။ ။ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် စွဲမြဲ
စွာဝတ်ဆင် ခဲ့သည့် ထောင်ဝတ်စုံ အပြာရောင် အင်္ကျီကို အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
တက်ရောက်လာ သူများအဆင်ပြေလျှင် ဝတ်ဆင် လာကြပါရန်။
U Win Tin (Journalist)
Memorial Service For the Late Sayar Gyi U Win Tin
We would like to invite you to memorial service for U Win Tin who was
passed away on 21 April in the early morning 6:30am. The service will
be held at the London Vihara monastery and venerable monks will be
chanting Pathana Pali for him.
All the attendees will be provided by Moat Hin Khar and refreshments.
Donations are welcome at the memorial service. The balance after the
above cost and donations to monks will be donated to U Win Tin
Date: 27/04/2014 – From 3.30 pm to 6.30 pm
Place: London Vihara Monastery ( Wembley ), 1 Old Church Lane Kingsbury London NW9 8TG
Click here to see Map and please see TFL website, www.tfl.gov.uk to plan your journey.
Remark: If possible, please wear blue colour to honour Sayar Gyi U Win Tin.
Zaw Zaw Aung 07961290823
Aung Gyi 07760411510
Khine Khine 07872073067
Min Hein 07846981155